Sidina an-dalamby vaovao eo anelanelan'i Newark Liberty sy Reagan National amin'ny United izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina an-dalamby vaovao eo anelanelan'i Newark Liberty sy Reagan National amin'ny United izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny serivisy fitaterana vaovao an'ny United eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena New York/Newark Liberty sy ny seranam-piaramanidina nasionalin'i Reagan dia hiasa fito andro isan-kerinandro, miaraka amin'ny sidina 18 manolotra serivisy saika isan'ora eo anelanelan'ny 6 maraina sy 10 ora alina.
United dia manambara ny fandaharam-potoana fitaterana vaovao eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina Newark Liberty sy Reagan National manomboka amin'ny 31 Oktobra miaraka amin'ny CRJ-550 kilasy roa.
United dia manao dia 32 isan'andro eo anelanelan'ny NYC-faritra sy DC, fitomboana 78% ary ny ankamaroan'ny sidina amin'ny sidina rehetra.
Ny sidina rehetra an'ny United avy any NYC dia handeha amin'ny fiaramanidina kilasy roa, anisan'izany ny fiaramanidina 737 MAX-8 sy CRJ-550 vaovao.
Ny United Airlines dia manao ny dia eo anelanelan'i New York City sy Washington DC ho mora kokoa sy mora kokoa, ary manambara anio fa hanomboka serivisy vaovao isan'ora eo anelanelan'izy ireo. New York/Newark Liberty International Airport ary ny Seranam-piaramanidina Nasionaly Reagan tamin'ny 31 Oktobra, ary manampy sidina dimy vaovao eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina LaGuardia sy ny seranam-piaramanidina Washington Dulles. Amin'ny fitambarany, United Airlines dia hiasa 32 isan'andro eo anelanelan'ny faritra NYC sy DC, fitomboana 78% ary ny ankamaroan'ny sidina amin'ny zotram-piaramanidina hafa.
United Airlines dia manome fanavaozana rehetra ho an'ny mpanjifany any New York City ihany koa: manomboka ny 31 Oktobra, ny fiaingan'ny zotram-piaramanidina rehetra New York/Newark Liberty International Airport, Ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena John F. Kennedy sy ny Seranam-piaramanidina LaGuardia dia ahitana safidy kilasy voalohany, anisan'izany ny 737 MAX-8 sy ny CRJ-550 - fiaramanidina rezionaly 50-seza voalohany eran-tany misy seza sy kojakoja kilasy voalohany. Hanolotra seza 7,000 mahery ho an'ny mpanjifa ao New York City izao i United, mihoatra noho ny zotram-piaramanidina hafa rehetra, ary ny betsaka indrindra amin'ny tantaran'ny zotram-piaramanidina.
"Amin'ny alàlan'ny fandefasana fiaramanidina midadasika sy maoderina mivoaka avy ao amin'ny faritr'i New York City, tsy vitan'ny hoe manome fahafaham-po sy safidy bebe kokoa ho an'ny mpanjifanay izahay fa manome traikefa azo antoka sy avo lenta amin'ny ankapobeny," hoy i Ankit Gupta, filoha lefitry ny zokiolona an-trano. Planning sy United Express.
"Ny mpanjifanay izay mandeha tsy tapaka eo anelanelan'i Washington, DC, ary New York dia nilaza taminay fa sarobidy amin'ny zavatra rehetra ny fampiononana sy ny fampiononana, ary ny United dia manolo-tena hanome ny serivisy avo lenta izay angatahan'izy ireo."
Ny CRJ-550 an'ny United no fiaramanidina isam-paritra 50-seza voalohany eran-tany natao hanolotra seza sy kojakoja kilasy voalohany. Namboarina tany am-boalohany mba hipetrahan'ny mpandeha 70 miampy, ny fanamafisana ny CRJ-550 an'ny United dia mampitombo ny fampiononana ny mpanjifa.
Serivisy shuttle vaovao an'ny United New York/Newark Liberty International Airport ary ny seranam-piaramanidina nasionalin'i Reagan dia hiasa fito andro isan-kerinandro, miaraka amin'ny sidina 18 manolotra serivisy saika isan'ora eo anelanelan'ny 6 maraina sy 10 ora alina, matetika kokoa noho ny zotra hafa rehetra. United Airlines dia hiasa dimy isan'andro ihany koa eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena New York/Newark Liberty sy ny seranam-piaramanidina Washington Dulles. Ny sidina vaovao eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina LaGuardia sy ny seranam-piaramanidina Washington Dulles dia hitondra ny isan'ny sidina isan'andro ho sivy ary hanome serivisy tsy tapaka fito andro isan-kerinandro eo anelanelan'ny 6 maraina sy 10 ora alina.